ဒေသ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေကို ဖြစ်စဉ်အမှန်အတိုင်း တင်ပြသွားမည်ဟု ရခ?? - Yangon Media Group
ဒေသ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေကို ဖြစ်စဉ်အမှန်အတိုင်း တင်ပြသွားမည်ဟု ရခ??
တိုက်ပွဲများ ကြောင့် ဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေ သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏အခြေအနေ အား ဖြစ်စဉ်အမှန်အတိုင်း တင်ပြ သွားမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်တည် ငြိမ်းအေးချမ်းရေးအထောက်အ ကူပြုကော်မတီက ပြောသည်။ ”ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ့။ ဖြစ်စဉ်အမှန်အတိုင်းပဲ ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသိ အောင် ကျွန်တော်တို့ မြ>ွခင်းမချန် ဘဲ တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါကော်မတီ၏ အတွင်းရေး မှူး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က ပြော သည်။
မေ ၁ဝ ရက် ညနေ ၇ နာ ရီခန့်က စစ်တွေရှိ အစိုးရဧည့်ရိပ် သာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကော်မတီနှင့် ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံအပြီး သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဦးတင်မြင့်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် အရပ်သားပြည် သူများကို သံသယဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ် ဆေးစဉ် သေဆုံးသွားသည့် ဖြစ်စဉ် များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီ၏ သဘောထားအား သတင်းထောက် များက မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ၎င်း မေးခွန်းသည် ကော်မတီနှင့်သက် ဆိုင်မှုမရှိ၍ ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် မငြိမ်မသက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ဒေသခံများ၏ အသံများကို ရယူရန်နှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ အတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေး အပ်ရန် မေ ၁ဝ ရက်တွင် စစ်တွေ မြို့သို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
”ကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရခိုင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီး ဦးညီပုနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးကိစ္စရပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီး၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဘယ်လိုများ ကျွန် တော်တို့တင်ပြရလဲ၊ ဒီရခိုင်ပြည် နယ်ကြီး အေးချမ်းသာယာဖို့အ တွက်ကို ကျွန်တော်တို့ ကော်မတီ ဝင်များအနေနဲ့ တကယ့်စိတ်ရင်း စေတနာအမှန်နဲ့ လာရောက်ဆောင် ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦး တင်မြင့်က ဆိုသည်။
အဆိုပါကော်မတီသည် မေ ၁၁ ရက်တွင်လည်း စစ်တွေရှိ နိုင် ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း များ၊ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ ဆုံကာ ရခိုင်ဒေသတည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ ကို ရယူခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ပေါက် တော၊ မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့ တောင်နှင့် ဘူးသီးတောင် စသည့် မြို့နယ် ခုနစ်ခုမှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၂၉၈၃၉ ဦးအတွက်ကိုလည်း ကျပ် သိန်း ၂၆၈၅ ဒသမ ၅၁ သိန်းကို ကော်မတီက မေ ၁၂ ရက်တွင် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကော်မတီကို နိုင်ငံ တော်သမ္မတက မတ် ၁၄ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်မ တီတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိ ယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဖွဲ့စည်းပြီး နောက် ဧပြီလအတွင်းတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်လာ ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်သည် ဒု တိယအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
မိုးအောင်ရင် ကဲ့သို့ အခြား မူးယစ်အကျဉ်းသားများအရေး ပြန်သုံးသပ်ပေးရန် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရ
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ဆင်ခွန်းဂိတ်တောင်ခြေဈေး၌ မြန်မာနိုင်ငံထွက် သစ်ခွပန်းများ အဖမ်းအဆီးကြောင့် အရောင်းအဝယ်ကျဆင်းနေ
သမီးဦး ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ်စတီးနား ပယ်ရီ